Sanbaloolshe “Soomaaliya waa inay nafteeda ka badbaadisaa Qatar” | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Sanbaloolshe “Soomaaliya waa inay nafteeda ka badbaadisaa Qatar”
Sanbaloolshe ayaa ugu horeyn ku bilaabay maqaalkiisa sida Soomaalida ku dhaqan gudaha iyo dibadda u soo dhoweeyeen doorashadii Madaxweyne Farmaajo iyo rajada laga qabay, in Diblomaasiyiinta ay aaminsanaayeen in Farmaajo noqon doono nin daacad ah oo firfircoon oo is bedel sameeye ah. “40-ka bilood ee uu xukunka hayo Madaxweyne Farmaajo kadib inuu Amniga dalka aad u liito, Dhaqaalihii burburay, Dowladihii Federalka kala qeybsan yihiin, Siyaasadda Dibadda oo aan sal lahayn, Hay’adihii Qaranka oo naafoobay, Cudurkii COVID 19 oo waxyeeleynayo Bulshadda, Muqdisho oo loo go’doomiyey cabsi laga qabo Weeraro Argagixiso”ayuu maqaalkiisa ku yiri Sanbaloolshe. Waxaa uu sheegay in muddo xileedka Madaxweynaha uu dhamaad yahay, isla markaana qorsheynayo muddo kordhin aan sharciga waafaqsaneyn iyo inuu abuur xaalad degdeg ah oo muddo xileedkiisa Madaxweyne ku dheereysto. Sidoo kale waxaa uu xusay in Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaarihiisa Kheyre lagu soo waramayo inay kala tagayaan, iyo in Mucaaradkiisa ay galaan-gal ugu jiraan sidii ay xilka uga tuuri lahaayeen.
Mr Sanbaloolshe ayaa sheegay in dowladda Qatar ay caqabad weyn ku tahay Soomaaliya, isla markaana taageero dhaqaale iyo farsamo ay siiyaan dowladda Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxda dowlad goboleedyada jaalka la ah dowladda Federaalka. Waxaa uu kaloo sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu haatan u nuqul yahay Qatar, iyo inuu heer xun gaarsiiyay xiriirki taariikhiga ahaa iyo midka istiraatiijiyaddeed ee ay Soomaaliya la laheyd dalalka Khaliijk Carbeed iyo Masaarida.
Previous articleHal QODOB oo muujinaya tuhun weyn iyo in qoraalka Cabdi Xaashi uu sax yahay
Next articleDagaalka qabow ee dunida kusoo laabtay ma badbaadin doonaa midnimada Somalia?